ढिलासुस्ती त काठमाडौंमा मात्र हो,गाउँमा धेरै घर बनिसकेः पराजुली
कृष्ण गिरी १७ मंसिर ।
२०७२ साल बैशाख १२ गते आएको विनासकारी भूकम्पछि बनेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण । लामो समयस्य राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बन्यो । सरकार परिवर्तन भएसंगै आ-आफ्ना मानिस भर्ति गर्ने केन्द्र पनि बनेको छ । यसले जुन गतिमा काम गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न नसकेको आम गुनासो अहिलेपनि छ । भूकम्पपछि धेरै हिउँद र बर्षात भूकम्प पिडितहरुले छानो बिना नै बिताएका छन् ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीसँग जनतापाटीका कृष्ण गिरीले अहिलेसम्म भएको कामका बारेमा कुराकानी गरेका छन् ।
२०७२ सालको विनासकारी भूकम्पपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म के-के काम गरेको छ ?
२०७२ साल बैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पपछि पुनःनिमाण प्राधिकरणको निर्माण भएको हो । यसले अहिलेसम्म धेरै काम गरेको छ । यसलाई दुई क्याटोगेरीमा राखेका थियौ । प्रवलिकरण र रिट्रोफिटिङ । यसमा निजि आवासको पनि सर्वे गरेका थियौँ । यसमा हामीले १४ जिल्लामा र १७ जिल्लामा सर्वे गरेका थियौँ । अहिलेसम्म लगभग ८ लाख घरहरु बनाउने काम भएको छ । स्वास्थ्य र स्कुलहरु बनाएका छौँ । अहिलेसम्म ४ हजार भन्दा बढी स्कुलहरु निर्माण गरीसकेका छौँ । स्वास्थ्य चौकिहरु ५ सय बनाएका छौँ । ८सय ५३ हेरीटेज बनाएका छौँ । सरकारी भवनहरु बनाएका छौँ । वस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रम महत्वपूर्ण छ । अहिलेसम्म ४ हजार वस्ती सार्नुपर्छ भनेका छौँ । अहिले भएको ठाउँबाट वस्ती सार्नुपर्छ भनेका छौँ । अहिले भएको ठाउँबाट अलि टाढा घरेडी किनेर घर बनाउनुपर्छ भनेका छौँ।
जुन काम युद्धस्तरमा हुनुपर्ने हो त्यसरी काम भएन भन्ने जन गुनासो छ , यसमा राजनीतिक समस्या हो कि कर्मचारीको तहबाट ?
सुरु सुरुमा हामीमा धेरै गुनासा आएका थिए । तर विस्तारै त्यो कुरा कम हुदै गयो । अहिले सबै कुरा हल भएको छ । अहिले मानिसहरुको बुझाइमा फरक आएको छ । गाउँमा पुनःनिर्माणका धेरै काम भएका छन् । अधिकांश मानिसले घर बनाएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको रकम लिएर घर बनाउने काम भएको छ । सुरुमा समस्या थियो ।
सुरुमा त समस्या धेरै आएनि पुननिमार्णको काममा ?
सुरुमा धेरै समस्या आए । संसारमा जहाँ पनि सुरुमा यस्तो अवस्थामा समस्या आउँछ । ८ लाख घर बनाउनु चानचुने कुरा होइन । केहि ढिलो भएको हो । अहिले गाउँ गाउँमा जानुभयो भने थाह हुन्छ । यहाँ बसेर होइन । संख्याको हिसाबले पनि ८ लाख घर बनाउनु धेरै हो । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको रकम पुनःनिर्माणले उपलब्ध गराईरहेको छ ।
घर बनाउन धेरै कुरा चाहिन्छ । जमिन,सिमेन्ट,काठ ,छड लगायतका धेरै सामान चाहिन्छ । बैकबाट पैसा निकालेर हातहातमा बाँडेजस्तो सजिलो छैन । घर बनाउन धेरै कुुरा चाहिन्छ । यो समस्या संसारमा नै देखिन्छ । सुरुमा पैसा बाडे जस्तो घर बनाउन सहज हुदैन । ६ महिनामा घर बन्न सक्दैनन । अहिले पूर्णतामा जाँदै छ । यसकोलागि तीन किस्ता दिएका छौँ । सरकारले ल्याएका योजना पुनःनिर्माणले तत्परताका साथ गरीरहेको छ । अहिले त गाउँ स्तरमा नै सबै काम हुने बनाएका छौ । हिजो जिल्लाबाट हुने काम अहिले नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट हुने बनाएका छौ ।
प्रभावित जिल्लाहरु कति वटा छन् ?
नवलपरासी अहिले दुई जिल्लामा विभाजित भएको छ । अहिले १८ कम प्रभावित र १४ जिल्ला धेरै प्रभावित जिल्लामा पर्छन ।
अति प्रभावित जिल्लामा पुनःनिर्माण अनुसार कति प्रतिशत घर बनेका छन् ?
अतिप्रभावित १४ जिल्लामा अहिले ३ लाख घर पूर्णरुपमा निर्माण भएका छन् । अन्य घरहरु निर्माणको प्रक्रियामा छन् । कयौँ घरहरु बनेर सकिने अवस्थामा छन् । यो हिउँदमा धेरै घरहरु बनेर सक्छन् । केहि घरहरु बन्न अझै समय लाग्न सक्छ । अधिकांश घरहरु १४ जिल्लामा बनेका छन् । केहि घरहरु बनेर अन्तिम तयारीमा छन् । सबै मानिसले घर पनि बनाउँदैनन । हामीले अनुदान दिने हो । व्यक्ति आफैले घर बनाउने हो । यसकारण यो जाडोबाट धेरै मानिसहरु सहजरुपमा आफैले बनाएको घरमा बस्ने अवस्था आउछ ।
अनुदानको रकम लिन धेरै झन्झटिलो भएको गुनासो अहिलेसम्म पनि छ ,यसको हल केहि छैन ?
अब हामी धेरै अगाडि आईसक्यौ । अब त्यस्तो छैन । हामीले भनेका छौँ अब सहज हुनुपर्छ । अब आउँदा दिनहरुमा यस्तो केहि भयो भने नयाँ तरिकाले जानुपर्छ । लामो र झन्झटिलो होइन । सहज तरिकाले सरकारी सहायता पाउने कुरा बनाउन सुझाव मात्र होइन अहिले त हामी जिल्लाले गर्ने काम गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट गराईरहेका छौँ । पहिलो जिल्लाबाट प्राविधिक जानुपथ्र्यो तर अहिले स्थानीय तहको प्राविधिकले नै हेर्ने बनाएका छौँ । अब केहि झन्झटीलो छैन ।
यो कार्यलयमा बसेर काम गर्दा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सबै कुरामा सन्तुष्ट हुन सकिदैन । म सन्तुष्ट छु । हामीले सिमित साधन स्रोतबाट धेरै काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले ल्यायका योजनाहरु लागुगर्ने ठाउँमा छु । मैले सकेसम्म जनताको पक्षमा नै काम गरेको छु ।
स्वास्थ्य र शिक्षाका भवनहरु कति प्रतिशत बने होलान ?
स्वास्थ्य चौकिहरु शतप्रतिशत बनाएका छौ । यो भनेको अस्थायी हो । यसले १० बर्ष जति काम गर्छ । अरु बनिरहेका छन् । स्कुलहरु बनी रहेका छन् । ३५ सय स्कुल बनिसकेका छन् ।
सरकारी भवन र निजी घर बन्न काठमाडौंमा किन ढिलासुस्ती त ?
ढिला सुस्ती त काठमाडौंमा मात्र हो । गाउँमा त धेरै घर बनिसके । यहाँ धेरै कुरा जोडिएका छन् । स्कुल त काठमाडौमा बनिसकेका छन् । निजी घरहरु बनाउन समस्या आएको छ । त्यो भनेको जग्गाको स्वामित्व र नक्साको कारण हो । घर बनाउन आरसिसी घर बनाउन खोज्छन् । अर्को जग्गाको अंशबण्डाको कारण हो । पहिला सगोलमा भएका मानिस अहिले अलग अलग हुन चाहन्छन् । यसकोलागि झन्झटीलो भएकाले हो ।
ऐतिहासिक स्थलनहरु पुनःनिर्माण हुन किन ढिलासुस्ती र विवाद ?
यसमा धेरै कुरा छन् । त्यसमा रिसोर्सको कुरा छ । रिसोर्स खोज्नुपथ्र्यो । सरकारसंग अथाह स्रोत छैन । यसका कारण पनि हो । दाताहरुबाट ल्याएर बनाउनु पर्ने हो । यसमा दाताको र हाम्रो कुरा मिल्नुपर्छ । पुरातत्वका भवनहरु बनाउन धेरै कुरा पुरा गर्नुपर्छ । यसको कारण हो । यसकोलागि त बषाँै लाग्छ । हामीसँग चाहेर पनि बनाउन सक्ने अवस्था नहँुदा पनि हो । कमि कमजोरी नहुने होइन । तर बनाउँदै छौँ ।
धरहरा बनाउन किन यति ढिला भएको ?
यो ढिला भनेको हावादारी कुरा हो । एउटा धरहरा बनाउन धेरै समय लाग्छ । यो ४ अरबको प्रोजेक्ट हो । यो चाहने बित्तिकै हुदैन । बर्षौँ लाग्छ । यसको नक्सा बनाउनुपर्छ । कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने छ । कसरी बनाउने । बाहिर,भित्र सबै कुरा मिलाएर बनाउने हो । टेन्डरमा गएको छ । यो जेठमा पलाएको बाँसको तामा होइन ।
स्वामित्वको समस्या कत्तिका आए ?
धेरै आएन । केहि छन् । जनगुनासा छन् । परम्परा जोगाउने कुरा छन् । छलफल बाट आएका समस्या सुल्झाएका छौँ । कहिँकतै भागचलन,बाटोघाटोको कुरा आए ।
रानी पोखरीको समस्या के हो ?
कुन मोडेलमा बनाउने भन्ने हो । यसमा स्वामित्वभन्दा पनि केहि प्राविधिक समस्या हो । कुन शैलीमा बनाउने भन्ने छ । पोखरी बनाउने अथवा अरु । कस्तो बनाउने भन्ने छ । कुन शैलीको बनाउने भन्ने छ । कसैले मल्लकालीन बनाउने भन्छन् कसैले राणाकालीन बनाउने भन्छन्।यहि हो विवाद ।
महानगरपालिकामा रानीपोखरीलाई लिएर विवाद भएको छ नि ?
केहि काम महानगरपालिकाले गर्छ । केहि काम दाताले गर्छ । केहि स्थानीयले गर्छ । केहि पनि भएन भने पुननिमार्णले गर्छ । यसमा विवाद भएको छैन ।
सिंहदरबार नै पुननिर्माण हुन सकेको छैन,यसको कारण के हो ?
यो अब शुरु भएको छ । यसमा पनि पुनःनिर्माण गर्न समस्या बढी हुन्छ । नयाँ बनाउनुभन्दा पुरानो बनाउन बढी समय लाग्छ । सिंहदरबार पनि पुनःनिर्माण हुने प्रक्रियामा गएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै सिईओ परिवर्तन गर्ने प्रचलनले पुनःनिर्माणमा कत्तिको समस्या आउँथ्यो ?
यो प्रश्न मलाई नसोध्नुहोस् ।
‘निजी क्षेत्रको सक्रियताबाटै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ’
सन् २०१८ सम्ममा सात करोड मानिस विस्थापितः राष्ट्रसंघ